घर क्लासिक स्टार्स गब्रिएल ब्याटिस्टुटा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
LB पूर्ण स्टोरीको पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नामले चिनिन्छ; 'Batigol'। हाम्रो गब्रिएल बैटिस्टाटा बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता सम्म पुग्नुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। अब थप adieu बिना, सुरू गर्न दिन्छ।
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक वर्ष
गब्रिएल उमर बैटिस्टुटा 1st Feburary, एभेलनेडा, एस्टारम उमर बट्टिस्टुटो (बुबा) र ग्लोरिया जिली (आमा) द्वारा एभलन्याडामा 1969 मा जन्मेका थिए। उहाँ अन्तिम जन्मे र उहाँका आमाबाबुको मात्र पुत्र हुनुहुन्छ।
सानो केटाको रूपमा, उनको सबैभन्दा असल मित्र उनको आमा थियो। त्यहाँ5र6थिए। त्यहाँ प्रेम ग्लोरियामा एक प्रिय साथीले गब्रिएल आफ्नो सानो छोरोको लागि थियो। लिटिलले थाहा पाए कि उनले अर्जेन्टिनाको सबैभन्दा ठूलो गोल मिसिन जन्माइन्।
गब्रिएल बाइटस्टाटा र उनको आमा, ग्लोरिया
यद्यपि उहाँ बचपनका दिनहरूमा चल्ने प्रकारको हुनुहुन्थ्यो। गब्रिएल ब्याटिस्टाटोले केही पागल शौकहरू सिके। तिनीहरू कसरी घुमाए पनि घोडाहरूमाथि खडा हुन जस्तै। उहाँले ती बेलामा केहि समय बित्यो। उहाँ आफ्नो एकअबबत क्षमताको कारण प्रसिद्ध छ।
गब्रिएल ब्याटिस्टुटा बचपन फोटो- एक एक्रोबेट मास्टर
विद्यालयमा गब्रिएल बाइटस्टाता हरेक विद्यालयको खेलकुद उपकरणको साथ रहन सक्थे। उनको पसंदीदा बिपोड स्विंग थियो। ब्रेक र समापन घण्टाको समयमा चिसो भएपछि उनी हिँड्न सक्दछन।
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -खेलकुद खोज्दै
सहयोगीहरू प्लेबिल हुनु, तिनको बचपन दिनबाट फुटबलसँग कुनै सम्बन्ध थिएन। आदर्शतः, गब्रिएलले प्रारम्भिक फुटबलमा रुचि राखेन। उनी खेलकुद भन्दा बढी आफ्नो शिक्षाविद्मा थिए। गब्रिएल बाइटस्टाटा एक विज्ञान विद्यार्थी थियो जुन एक पटक एक चिकित्सक डाक्टर बनने सपना देख्यो। बच्चाको रूपमा, उसले विज्ञान प्रयोगशालामा घण्टा बिताउन सक्छ।
गब्रिएल ब्याटिस्टुटा बचपन फोटो- शैक्षणिक
एक युवाको रूपमा, उनले भन्दा अन्य खेलहरू मन पराए फुटबल पछि पछि पछ्याउन छनौट गर्नुहोस्। गब्रिएल बाइटस्टाटो उनको उमेरको लागि लामो थियो र विशेष गरी बास्केटबलको आनन्द थियो। यो बास्केटबलको लागि प्रेम थियो जुन उनले सामान्यतया खेलहरूमा चासो लिइन्।
उहाँले 1978 फीफा विश्व कप सम्म बास्केटबल खेल्नुभयो जब फुटबलको लागि जुनून अर्जेन्टीनाले टूर्नामेंटलाई जित्न पछि विकास गर्न थाल्यो। सायद, त्यो वर्ष 1978 सम्म आफ्नो भविष्य पेशा के हुनेछ मा उनले धेरै चासो राखेका थिए।
त्यो गर्मीमा अर्जेंटीनाले विश्व कपको मेजबानी गर्यो। बटस्टुतालाई उनले हेरे जस्तो लागेन ला अल्बेलेस्ट टूर्नामेंट जित्न कठिन बाधाओं को सामना। त्यस पलबाट, उनले खेलको पछि लाग्ने निर्णय गरे र केहि साथीहरूसँग एक स्थानीय क्लबमा सामेल गरे।
बिटिस्टाटोको प्रारम्भिक प्रदर्शनले उनलाई तिनको कच्चा प्रतिभा देखाइदिन्छ, जुन सानो सानो क्षमताको क्षमता छ। यद्यपि, न्यूलका पुराना केटाहरूले विश्वास गरे कि उनी एक विशेष खेलाडी हुनेछन् र उनीहरूलाई एक व्यावसायिक अनुबंध प्रदान गरे।
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
फेथर: श्री ओस्मार मर्म बटिस्टुटा गब्रिएलको बुबा हो। उहाँ एक इस्लामिक / अरब / ओर्थमन मूल हुनुहुन्छ। उनी आफ्नो छोराको कतारको अन्तिम स्ट्राइक (2003 - 2005) कतारमा अलबारीबी एससी फुटबल क्लबमा सामेल हुनुहुन्थ्यो।
गब्रिएल बाइटस्टाको आमाबाबु (बुबा) - ओस्मार उमर
SISTERS: गब्रिएल बैटिस्टाटा उनको परिवारको मात्र पुत्र हो। उनको तीन बहिनी अर्थात् अर्थात् एलिसा (बायाँ), गब्रिएला र अलेलेज्यान्ड (दायाँ) छ।
गब्रिएल ब्याटिस्टाटाका बहनों
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
16 को उमेर मा, उनको उनको इरिना फर्नांडे, उनको भविष्य को पत्नी संग मिले quinceañera, उनको 15th जन्मदिन मा यात्रा को एक संस्कार। 28 डिसेम्बर 1990 मा, तिनीहरू सेन्ट रोक चर्चमा विवाहित थिए।
गब्रिएल ब्याटिस्टुटा वेडिंग फोटो
जोडा सारियो फ्लोरेन्स, इटाली, 1991 मा, र एक वर्ष पछि उनीहरूको पहिलो छोरा थियागो जन्मेको थियो।
गब्रिएल ब्याटस्टाटा पत्नी र पहिलो पुत्र, थियागो
इटाली च्याम्पियनशिप मा राम्रो प्रदर्शन को लागी र अर्जेण्टीना राष्ट्रीय टीम संग, Batistuta प्रसिद्धि र सम्मान प्राप्त भयो। उनले धेरै व्यवसायीलाई फिलिम गरे र धेरै टिभि शोहरूमा आमन्त्रित गरिएको थियो, तर यसको बावजूद, Batistuta सधैं एक कम प्रोफाइल परिवार बनेको थियो।
1997 मा, बिटिस्टाटाको दोस्रो छोरा, लूकास, जन्मिएको थियो, र जेनोक्व एक तेस्रो छोरा, 1999 पछि।
गब्रिएल ब्याटिस्टाटाको परिवार फोटो
तिनको चौथो पुत्र शमिल नामक 2000 मा जन्मिएको थियो। त्यो वर्ष बिस्टिस्टुटा थियो र तिनको परिवार रोममा सारियो, जहाँ उनले खेले रोम। शमेल जन्मिएको दुई वर्ष पछि, बिटिस्टुटा इन्टरनेटमा लिइएको थियो।
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -उपनामहरू
गब्रिएल बाइटस्टाटाले आफ्नो जीवनमा अहिलेसम्म तीनवटा उपनाम प्राप्त गरेका छन्। पहिलो उपनाम हो 'Batigoal'। यसको यसको पहिलो नाम र लक्ष्य स्कोर गर्ने लक्ष्य को संयोजन। दोस्रो is 'एल एन्जेल गब्रिएल'। यो नाम उनको पहिलो नाम 'गब्रिएल' बाट आयो। 'एन्जिल' उनीहरूको लक्ष्यले गर्दा धेरै अवसरमा अर्जेन्टिनालाई बचाइयो। अन्तमा, उनले पाए 'सिंह राजा' एक उप नामको रूपमा। यो यसको कारण हो 'सिंह राजा' जस्तो देखिन्छ जस्तो देखिन्छ।
गब्रिएल बाइटस्टाटो स्टोरी - द हायरको हार्टको साथ
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -BATIGOL उपनामको अर्थ
बी बेरोजगारको लागि हो - केहि जो Batistuta बहुतायत मा छ। Tendonitis या नहीं, ठूलो मान्छे थियो, वर्ष को लागि, आफ्नो दाहिनी घुटने मा दुखाइ को बावजूद दर्दनाकहरु मा खेले, बस उनको कारण उसलाई टीम को आवश्यकता हो।
A को लागी एरेजेन्टिनाको लागि हो - ब्याटिस्टाटोको घर राष्ट्र। रिटाक्टास्टामा जन्मे, सांता फेभले उनलाई राष्ट्रिय टीमको उपाधि जितेको छ र अहिले अर्जेंटीनाको इतिहासमा शीर्ष स्कोरकर्ता छ।
गब्रियल बेटिस्टुटा- अर्जेण्टीना लक्ष्य मिसिन
T तिनिको लागि हो - ब्याटिस्टाटाको उमेर। अब उनको क्यारियर को गोधूलि मा, उसले अझै पनि सेरी ए को सबै भन्दा खतरनाक स्ट्राइकहरु मध्ये एक छ
म ICON को लागि हो - कुन कुरा Batistuta हो, एक निश्चित फुटबल प्रतिमा। अर्जेंटीनाको एक नायक, उनको गोल-फाइदा उठाउने काममा लिङ्ग्रेन्सहरू पराजित भएका छन डिएगो मराडोना र अल्फ्रेडो डी स्टेफानो।
जी लक्ष्यहरु को लागि हो - जो कुरा Batistuta सबै भन्दा राम्रो उद्धार गर्दछ। एक घुटने को चोट को बावजूद, उनले यस सीजन को रोम को लागि 18 लक्ष्यहरुलाई अझै पनि नाट गरे। 207 लक्ष्यहरु लाई अर्जेन्टिनाका लागि 332 मा Fiorentina र 54 को लागि 74 अवधारणाहरुमा netted गरेको छ।
गब्रिएल Batistuta- गोल मिसिन
ओ OLYMPIC STADIUM को लागि हो - अन्यथा Stadio Olimpico, रोमको घर स्टेडियमको रूपमा चिनिन्छ, जहाँ Batistuta अन्ततः एल्युसिटिव सेरी ए शीर्षक हुन सक्छ जुन उनी धेरै धनी पात्र छन्।
L लोलिटीको लागि हो - यो सब पछि, जो मान्छे Fiorentina संग नौ वर्ष को लागि फँस गयो, यहां सम्म कि जब क्लब 1993 मा रिग्लुग गरिएको थियो, र रोम शर्ट मा क्लब को विरुद्ध स्कोर गरे पछि रोए।
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -धर्म र जनजाति?
"गब्रिएल" एक इस्लामी नाम को ईसाई संस्करण हो "Cebrail"। (एक स्वर्गदूत वा एक जना को नाम जसको आधारमा तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ) - उनको पहिलो नाममा कुनै स्पष्ट संकेत छैन।
"उमर" (उनको मध्य नाम) एक इस्लामिक नाम हो, निश्चित छ। "Batistuta"(उनको उपनाम): हामी यस बारे मा नहीं जान्छ कि यो के मतलब छ। सायद एक ल्याटिन वा एक ईसाई नाम।
खैर, तपाईंले बुझ्नुभयो कि म सोध्न जाँदैछु। गब्रिएल उमर Batistuta के पनि एक इस्लामिक एंकर / पृष्ठभूमि छ? उत्तर जवाफ हो 'YES'।
अर्जेन्टीनामा केही टिप्पणी उदाहरणका साथ: तपाइँ अर्जेंटीना अध्यक्षको उप नाम जान्नुहुन्छ। उहाँलाई "एल टर्को" भनिन्छ। वास्तवमा, तिनी टर्की होइन तर मिश्रको पूर्वज थियो जसले केही शताब्दीअघि दक्षिण एसियाली यात्रा गरेका थिए (शताब्दीअघि लगभग 4-5।)। त्यस समयमा, मिश्र एक राज्य जस्तै थियो Ottoman साम्राज्य जो टर्की, मिस्रियन, अल्जेरियन, केहि अन्य अरबी देशहरू र केही बाल्कन देशहरूको मिश्रण थिए।
"उमर" नाममा फर्कनुहोस्। यो एक इस्लामी हो (वा भन्न को लागी राम्रो, अरबी नाम। साथै, यो एक टर्की नाउँ छैन)। तथापि, ओटोमोन्सहरूले इस्लामिक (अरबी) नाउँहरू प्रयोग गरेका थिए, यसैले, उमर (वा ओमर) पनि हो Ottoman नाम।
त्यसैले, म तपाईंलाई अर्जेंटीना अध्यक्ष र गब्रिएल उमर बैटिस्टुटाको बीच समान समानता बुझ्न निमन्त्रणा गर्छु र म दाबी गर्छु कि गब्रिएल उमर बाइटिस्टुटामा ओटोम्यान्सबाट आर्केस्ट (शायद आधा) छ। यसका लागि उनीहरूको एङ्ग्रेस्टर थियो, शायद तुर्क, शायद मिस्रबाट एक अरब, सम्भवतः सिरियाबाट, शायद बाल्कन देशबाट हो, शायद अल्जेरियाबाट। अल्जीरिया राम्रो लाग््छ किनकी Zidane पनि आधा अल्जीरिया थियो
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -अन्तर्राष्ट्रिय एक्काडेड
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, अर्जेंटीनाको सबै-समयको प्रमुख लक्ष्यद्वारकर्ता छन्। उनले तीन विश्व कप खेले। 1999 मा, ब्याटिस्टुटा फीफा विश्व खेलाडीको वर्षको पुरस्कारमा तेस्रो स्थान थियो। 2004 मा उनी फिफा 100 सूचीमा शीर्ष 125 सबैभन्दा ठूलो जीवन फुटबलका सूचीमा राखिएको थियो। नैदानिक ​​परिष्करण, शीर्षक र फ्री-लिने क्षमताहरू सहित सबै-राउन्ड गेमको साथ, उनी उनको पीढीको सबै भन्दा पूर्ण स्ट्राइकरहरूको रूपमा चिनिन्छन्। डिएगो मराडोना भनिएको छ कि ब्याटिस्टाटा त्यो राम्रो स्ट्राइकर हो जसले उनले कहिल्यै खेल खेलेको छ।
गब्रिएल बैटिस्टुटा - अर्जेण्टीना लक्ष्य योद्धा
1998 विश्व कपमा, बेटिस्टाटोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा दोस्रो सेकेन्ड ट्रिक रेकर्ड गरे, उनले मात्र यो खेलाडीलाई प्राप्त गर्न केवल खेलाडी बनाउनेछन्। तथापि, क्वार्टरफाइनलहरूमा नेदरल्यान्ड्सले अर्जेंटीनालाई पराजित गरेको रूपमा पर्याप्त थिएन। बेटिस्टाटोले घोषणा गरे कि 2002 विश्व कप उनको अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुनेछ, अर्जेन्टीनालाई भावनात्मक वृद्धि प्रदान गर्ने। टूर्नामेंटमा जाँदै, टोलीले यसको मौका जित्नको लागि धेरै राम्रो लाग्यो। एकपटक फेरि, यो छोटो आयो। आफैलाई खोज्दै "मृत्युको समूह", ला अल्बेलेस्ट1962 पछि पहिलो पटकको सुरुवातमा टूर्नामेंटबाट बाहिर निस्किएको थियो। अर्जुन अर्जेन्टिनाले नाइजीरिया विरुद्ध2जुन जुन 2002 मा बनाएको थियो।
नाइजीरिया विरुद्ध गब्रिएल बैटिस्टाटा अन्तिम लक्ष्य
ब्याटिस्टाटोले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय क्यारियरलाई एक्सटेन्सन 56 लक्ष्यहरूको साथ मात्र 78 अवधारणाहरूमा एक नम्बरको अन्त्य गरे जुन कहिल्यै पार नगरेको छैन।
गब्रियल ब्याटिस्टुटा - अर्जेन्टिनाको शीर्ष लक्ष्य स्कलर
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सारांशमा क्लब क्यारियर
बेटिस्टाटाको व्यावसायिक क्यामेरा एक सुस्त सुरुवातमा गए। न्यूभेलको साथ निराशाजनक सिजन पछि, उहाँले नदी प्लेटलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यहाँ, उनको संघर्ष जारी राख्यो कि उनले3उपस्थितिहरुमा केवल नेट एनएनएक्सएक्स नेट को पीछा गर्न सफल भए।
बिटा जिसियर्सको साथमा अर्को बस्टमा ब्याटिस्टाटाका लागि चीजहरू जेल लाग्न थाले। क्लबले उनको आक्रमणको फोकल प्वाइन्ट बनायो र उनले 13 गोलको स्कोर गरी जवाफ दिए र बोकालाई लीग च्याम्पियनशिप जित्न मद्दत गरे। उनको प्रभावशाली रूपले 1991 मा इटालियन क्लब फ्येरेन्टीनाको स्थानान्तरण गरेको थियो। Batistuta को प्रदर्शन संग La Viola पिचलाई पराजित गर्न सबैभन्दा ठूलो खेलाडी मध्ये एक को रूप मा उनको विरासत सीमेंट हुनेछ।
उहाँ पछि रोममा पठाइएको थियो र एक3वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। ब्याटिस्टाटा को लागि भुक्तानी गरिएको शुल्क 30 उमेर मा एक खेलाडी को लागि सशुल्क भुक्तान गरिएको छ।
रोमा साथ उनको पहिलो सीजनमा, उनले 1983 पछि आफ्नो पहिलो स्कुडटोटो च्याम्पियन क्लबलाई 20 उपस्थितिमा 28 गोल गर्दै गोल गरे। रोमसँग निम्न सिजन, उनले स्कर्टेटो-विजेता अभियानको दौडान गोल गरेका लक्ष्यहरूको सङ्ख्या सन्दर्भमा 18 बाट 20 बाट आफ्नो शर्ट नम्बर परिवर्तन गरे। उनी एएस रोम हॉल अफ फेममा घुसिएका थिए।
गब्रिएल ब्याटिस्टुटो- रोम लेजेंन्ड
रोममा3सीजन पछि, उनी अन्तर मिलान गर्न लायक थिए, र त्यसपछि इटाली छोडेर कतारमा अल अरबीलाई सहभागी हुन छोड्यो। कतारमा, उहाँले 25 सँग एक सिजनमा गोल गरेका सबै गोलहरूको लागि रेकर्ड तोड्नु भयो, एक रेकर्ड कि पहिले पहिले कतारको किंवदंती Mansour मुफ्ति द्वारा आयोजित थियो।
सबैमा, बिटिस्टाटा रोमी, फरिन्टेना र इन्टर मिलानसँग 184 म्याचहरूमा 318 लक्ष्यहरूको साथ सेरीको इतिहासको ग्यारहर्वे उच्चतम स्कोरकर्ता हो।
उहाँले 516 लक्ष्यों को स्कोर, 300 क्यारियर उपस्थिति बनाइयो, फ्लोरेन्स मा नौ वर्षीय वर्तनी को समयमा 207 फेरिएर्नना को लागि सहित।
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पैग एम्पेशनेशन अनुरोध
अर्जेंटीना किंवदंती गब्रिएल बैटिस्टुताले आफ्नो खुट्टालाई घुमाउन डाक्टरलाई बिहे गरे जुन उत्तेजित दुखाइको कारण उनले 2005 मा रिटायर गरे पछि लाग्यो। पूर्व स्ट्राइकर, जसले 56 अन्तर्राष्ट्रिय क्याप्सनमा 78 टाइम्स र त्यतिबेलाको लागि सेरी एमा आतंकवादको रक्षा गरे, उनीहरूले 17 वर्षको क्यारियरको समयमा आफ्नो शरीरमा दबाब दिएका थिए।
किन गब्रिएल ब्याटिस्टाटो ले पैग एम्पेशनको लागि शुरु भयो
बेस्टिस्टुटा, जो 1998 विश्व कपमा इङ्गल्याण्ड विरुद्ध एक दण्ड नगरेको, हिँड्न सकेन र बाहिरी गीले बाहिरिन्थ्यो किनभने उनी बाथरूममा घुम्न सकेनन्।
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पोस्ट सेवानिवृत्ति
सेवानिवृत्त भएपछि, उनी पर्थ, अष्ट्रेलिया गए र पछि निर्माण निर्माण कम्पनी सुरु गर्न 2007 मा अर्जेंटीना फर्कियो। अर्जेंटीना मा आफ्नो कोचिंग ब्याज कमाई को बावजूद, उनको वर्तमान मा फुटबल संग कुनै सहभागिता छैन। बरु, उनी पोलो खेल्न चाहन्छन्।
गब्रिएल Batistuta- पोलो मास्टर
उहाँसँग धेरै घोडाहरू छन् कि उहाँले आफ्नो खेतीमा राख्नुहुन्छ उहाँ आफ्नो बुबाको मालिक हुनुहुन्छ। Batistuta पनि जानवर प्रजनन को लागि जानिन्छ। पोलो सहयोगी, उसले गोल्फ पनि खेल्छ। उहाँ एक चोटि यसो भन्दै उद्धृत गरिएको थियो, 'म फुटबल मनपर्दैन, यो मेरो मात्र काम थियो।'
गब्रिएल Batistuta- गोल्फ मास्टर
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सबैभन्दा सुन्दर सुन्दर फुटबल
Batigol खेलको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आक्रमणकारी थिए ... र एक महिलाहरु लाई पनि पसंदीदा। उनले एक फेशन क्यारियरमा कुनै पनि खास रुचि देखाएनन्, तर उनको सुन्दर, रक-स्टारले विश्वभर वरिपरि आफ्ना महिला प्रशंसकहरूलाई उत्साहित बनायो, जसले उनीहरूलाई वेबमा एकपछि अर्को प्यानर पृष्ठ समर्पण गर्यो।
गब्रिएल उमर Batistuta- धेरै सुन्दर फुटबलर
अन्ततः, उहाँले आफ्नो ध्यानको लागि निरन्तर मागमा दिनुभयो र आफैंको सानो टुक्रा फैशन उद्योगमा ऋण दिनुभयो जब उनले '90s' मा स्टिंग चश्मालाई संक्षिप्त रूपमा विज्ञापित गरे।
महिलाहरु उनको प्राइममा पनि उहाँलाई माया गर्थे, किनकी उनी उनको पुस्ताको सबैभन्दा सुन्दर फुटबल खेलाडी मध्ये एक थिए। त्यो धेरै सेवानिवृत्त पछि पनि धेरै अर्जेण्टीना विज्ञापनहरु पछि देखा पर्यो।
गब्रिएल ब्याटिस्टुटा - एकपटक एक मनोरम टिभी स्टार
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -फ्लोरेंस मा एक लीजेंड
जब Fiorentina को 1993 मा सेरी बी मा पुनः पेश गरियो, Batistuta क्लब संग रहयो र एक वर्ष पछि इटाली शीर्ष फ्लाइट मा फिर्ता मदद। फ्लोरेन्स मा एक किंवदंती, Fiorentina प्रशंसकहरूले 1996 मा उनको जीवन जीवनको कांस्य प्रतिमा बनायो।
गब्रिएल Batistuta- फ्लोरिन्टाइन लक्ष्य मिसिन
Fiorentina संग सबै प्रतियोगिहरु मा, Batistuta कुल 207 लक्ष्यहरु मा 333 उपस्थितिहरु -एक ब्लिस्टर .62 लक्ष्य प्रति उपस्थिति। यसको अतिरिक्त, उनले 26 मा एक लीग-प्रमुख 1995 लक्ष्यहरु बनाए र फाइनपा इटाली र 1996 मा Supercoppa जीतयो।
गब्रिएल ब्याटिस्टाटोको ट्रेडमार्क लक्ष्य उत्सव
गब्रिएल Batistuta बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -क्यू र उनको पोष्ट प्ले लाइफको बारेमा
यो Batistuta क्यू र जस्तो देखि विश्व फुटबल।
विश्व फुटबल: हामीले तपाईंलाई केही समयसम्म यूरोपमा देखेको छैन, गब्रिएल ...
गब्रिएल ब्याटिस्टाता: जब म युरोप फर्कन्छु, म पत्रकारहरूलाई कल गर्दैन! इटालीमा उनीहरूले उजुरी गर्छन् कि म भ्रमण गर्दैनु, तर म फ्लोरेंसमा एक घर छ जुन म वर्षमा तीन वा चार पटक भेट्छु। मैले केवल अग्रिम कल गर्दैन!
त्यसैले जीवन फुटबलबाट राम्रो छ?
म उजुरी गर्न सक्दिन।
के तपाईं धेरै फुटबल हेर्नुहुन्छ?
म बजिरहेको बेला म अब अधिक म्याचहरू हेर्न चाहन्छु। म सक्दिन जब स्टेडियममा जान्छु, तर म टिभिमा धेरै खेलहरू पनि देख्छु। यो क्षणमा मेरो जीवनमा अझै पनि 20-वर्षको दबाबबाट आएको छु जुन म जान्छु।
के तपाईं केहि बिन्दुमा फुटबलमा फर्किने योजना बनाउनुहुन्छ?
मैले मेरो कोचिंग डिप्लोमा पाएको छु तर मेरो योजना, यदि म फुटबलमा जान्छु भने टोलीको प्रबन्धकको रूपमा हुनेछ, कोचको रूपमा होइन।
के यो हो किनकि कोचिंग धेरै तनावपूर्ण छ?
संसारभरि यो त्यहि हो। दुर्भाग्यवश कोचिंग को पेशे एक छोटो छोटो एक छ, चाहे तपाईं जित्नुहुन्छ या नहीं। र म त्यो बारेमा धेरै भावुक छैन!
के तपाईं अर्जेन्टिना को बगलमा विश्व कप को लागि मनपर्ने छ?
ब्राजील मनपर्छ। स्पेन राम्रो खेलिरहेको छ। अर्जेन्टिनाले राम्रो मौका पाएका थिए किनभने तिनीहरूसँग धेरै राम्रो खेलाडीहरू छन् र एक कोच जसले धेरै पटक जितेका छन् र खेलाडीहरूलाई जित्ने विजेता मानसिकतालाई प्रसारण गर्न सक्छन्।
डिएगो मराडोना क्वालिफायरमा धेरै टीम परिवर्तन गर्न आलोचना गरियो। विश्व कप भिन्न हुन सक्छ, किनकि उसले 23 को आफ्नो टोली बदल्न सक्दैन?
अंतर यो हुनेछ कि त्यो एक महिना को लागि एक नै खिलाडी संग काम गर्न सक्छन्, र यो सबै निर्भर गर्दछ कि उनि कसरि विश्व कप मा आइपुग्दा खेलाडी कैसा महसूस गर्दै छन्।
तपाईंले 1994 मा माराडोनासँग खेल्नुभयो। के उनी टोलीमा सबैभन्दा बलियो व्यक्तित्व थियो?
होइन, हामी सबैको बलियो व्यक्तित्व थियो। हामी सबै टोलीको लागि उत्तम चाहन्थे। त्यसैले हामी मानिसहरू ड्रेसिङ कोठामा बोल्न र निश्चित भए हामी सबै सुनेका छौं। माराडोना कुनै अपवाद थिएन।
के थियो 1998, जब तपाईं तिमाही-फाइनलमा पुग्नुभयो, तपाईंको लागि एक राम्रो टूर्नामेंट?
मैले खेलेका तीन विश्व कप मध्ये कुनै पनि मेरो लागि राम्रो थिएन किनकि हामीले जितेनौं। हाम्रो लागि अर्जेन्टिनीनियनहरू यो तीन खेल वा पाँच खेल पछि पछि फर्किए।
तपाइँ कतारमा तपाईंको क्यारियर किन छोड्नुभयो? तपाईं कहीं पनि सार्न सक्नुहुनेछ।
म मेरो व्यावसायिक क्यारियरको अन्त्यमा थिएँ। मलाई अर्को अनुभव चाहियो, म अर्को संस्कृतिको बारेमा जान्न चाहन्छु। यदि म स्पेन वा इङ्गल्याण्डमा जान्छ भने मैले पहिले नै अनुभव गरेको थियो जस्तो धेरै कुरा भएको थियो।
जीवन शैलीको बारेमा के फरक थियो। के केहि पनि मुश्किल थियो?
होइन, मैले सुरुबाट सजिलै महसुस गरेँ। म मेरो श्रीमती र मेरो छोराछोरी संग गए। हामीले उच्च स्तरका स्कूलहरू भेट्यौं। अस्पतालहरू उच्च स्तरको थिए। मेरो चौथो पुत्र त्यहाँ जन्मिएको थियो र म उहाँलाई जन्मेको चाहान्छु। त्यो मेरो जीवनमा दुई वर्षको लागी एक कारक थियो।
र अब तपाइँ कतारको 2022 विश्व कप बोलीसँग संलग्न हुनुहुन्छ।
मेरो दुई वर्ष बाँचेर मेरो र मेरो परिवारको लागि अद्भुत अनुभव थियो। मैले खेलकुद रोकिदिए किनभने मलाई मेरो टाँस्नका साथ समस्या थियो, तर त्यहाँ मैले बिताएको समय मेरो मनको पछाडि सधैंभरि थियो। कतर द्वारा सम्पर्क गर्न यो एक खुशी थियो किनभने यसको अर्थ मैले त्यहाँ सकारात्मक प्रभाव छोडेको हुनुपर्छ।
कतारमा विश्व कप एक फरक फरक टूर्नामेंट हुनेछ। हामी प्रसिद्ध फुटबलिंग शहरहरूमा जस्तै ब्यूनस आयर्स वा रोममा विश्व कप फाइनलका बारेमा सोच्न चाहन्छौं।
फिफाको आदर्श वाक्य फुटबलको लागि सबैको लागि हो। हामीले मध्य पूर्वमा एक विश्व कप कहिल्यै पाएनौं। हालैका वर्षहरूमा अरब संसार खोलिएको छ। हामी यस अवसरलाई विश्वभर अरब विश्व दिन फिफाको लागि एक मौका छ।
खेलकुदको अवस्था कसरी हो? मानिसहरू तापमानको बारेमा चिन्तित छन्।
मैले त्यहाँ दुई वर्ष खेलेँ। यो तातो थियो तर तपाईं राम्रो तरिकाले राम्रो खेल्न सक्नुहुन्छ। अब तिनीहरू अल सड स्टेडियममा कूलिंग प्रणालीमा काम गरिरहेका छन् जहाँ टेक्नोलोजीले स्टेडियम भित्रको तापमान 20 डिग्री हुन सक्छ जब यो 30 वा 40 बाहिर छ।
थियरीरी हेनरी ह्यान्डबलले के गरे?
जब तपाईं पिचमा हुनुहुन्छ, चीजहरू हुन्छ र तपाईंलाई थाहा छैन कि प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ। सम्भवतः उनले थाहा पाए कि तिनले के गरे।
त्यसोभए हेनरीको काम अप्ठ्यारो थियो?
पक्कै पनि। तर फीफाले प्रविधिको सहयोग स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले देखेको छैन किन फुटबलले आफ्नो प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिमा खोल्न हुँदैन?
के त्यहाँ टिभी प्रतिस्थापन गर्न मद्दत गर्दा तपाईंको क्यारियरमा कहिले काहीं थिए?
पक्कै पनि। रेफरीहरूको बारेमा त्यहाँको संदेह छ। मानिसहरूले सोचेका छन् कि रेफरीले कसरी टिभीमा देखाएका चीजहरू देख्न सक्दैनन्? कुनै पनि संदिग्ध हटाउन मद्दत गर्दछ।
लिओनेल मेस्सी तपाईंको पुरानो टोलीको लागि नयाँ खेलाडी, नेललका पुराना केटाहरू खेलेका थिए तर धेरै युवा किशोरको रूपमा युरोप गए। तपाईं धेरै उमेरमै इटाली जानुभयो। खेलाडीहरू अहिले धेरै समयसम्म युरोप जान्छन्?
हो। जब मैले खेल सुरु गरें, म 18 वर्ष पुरानो थियो। कहिले Messi 18 थियो त्यो बार्सिलोनासँग ट्राफिकहरू। ती दुई चरमहरू छन्। मैले ढिलो गर्न थाले, उनले धेरै जवान गरे। सच्चाइ बीचको बीचमा छ।
त्यहाँ धेरै दबाव भएको छ Messi धेरै प्रारम्भिक उमेर बाट। तपाईं बढि बढ्दै जान्नुभयो।
दक्षिण अमेरिकी खेलाडीहरूलाई खेलकुद दृष्टिकोणबाट चाँडै बढ्छ, तर मानसिक रूपमा तिनीहरू राम्रो तयार छैनन्। जब 18 को शीर्ष विभाजनमा स्पैनिश, इटालियन वा अंग्रेजी प्लेयर देख्न गाह्रो हुन्छ यो। अर्जेन्टिनामा, जब तपाईं 18 हुनुहुन्छ, तपाइँ पहिले नै एक वा दुई च्याम्पियनशिपहरूमा खेल्नुभएको छ। क्लबहरू बेच्न आवश्यक छ, त्यसैले तिनीहरू 20 वर्षीया खेलाडी बेच्नका लागि किनकि अर्को एक पछाडिको हो।
29 सक्छ, 2017